Reniko efa niraikitra
Stefan Hallman ny boky mahagaga!
Izaho dia mandrisika "Ny reniko no nanindrona" ny Stefan Hallman. Izany dia fijoroana ho vavolombelona lehibe ny amin'izay Jesosy dia afaka atao ho an'ny olona.
"Ny reniko no efa niraikitra" dia ny fomba Stefan Lehibe tany mpisotro toaka be ady, mameno, fanafihana ary rehefa namonjy azy i Jesosy.
Izy io dia tena mahery vaika boky dia tsy hiala na iza na iza tsy miraharaha.
Avy amin'ny votoatiny
Helo ao an-trano, nanomboka tamin'ny reniny Nandositra niala tao an-trano. Dia nandray ny fiara fitateram-bahoaka nidina nankany amin'ny tanàna hisotro. Dia nisy izany izahay, dia nilaza hoe: "Neny niraikitra."
Halako ireo teny ireo. Fantatro: Inona izany rehefa tonga tao an-trano i Dada ... ny fahatsiarovana ny fandatsahan-drà sehatra, ary ny fitarainan'ny mafy ny reniny, rehefa nandry tao amin'ny takona izany nersparkad ka novakivakiny.
Raha tonga tao an-trano i Dada sy Neny Isaka nandre ny toaka kely indrindra, dia nandeha berserk.
Ny zava-drehetra dia manomboka rehefa tonga avy nianatra. Avy eo dia nahatsapa tsara ahy ny reniko naka labiera. Dia tahaka mora mahatsapa ny azy any toy ny knarkhund. Raha efa naka vitsivitsy fotsiny sips tonta nataoko izany ihany.
Toy izany koa i Dada, dia nahatsapa zavatra avy hatrany dia diso fangataka, ary tsy ela dia nanomboka indray any amin'ny helo.
Tsy sahy nandeha an-trano, dia nahatsapa fa tsy maintsy hiarovana ny reniko sy ny rahalahiko telo zandriny.
Ary nanomboka tontolo devoly. Afaka mitehaka ho azy amin'ny totohondrin'ny mihidy mahitsy eo tarehiny tahaka ny rà spurted avy ny orony, dia nankany amin'ny tany miaraka ny fahasimbana, ary dia nanomboka mandaka azy.
Mahavariana fijoroana ho vavolombelona ny amin'izay Jesosy dia afaka atao
Efa ankoatra ny zavatra hafa no serialized ao amin'ny gazety kristianina sakaizan'i The an-trano.
Ny boky ihany koa mety ho toy ny evangelisationsbok.
Vecka 29, söndag 25 juli 2021 kl. 10:21